आफन्तबाटै सुरक्षा छैन भने अन्त कहाँ होला ? Archives - Nepal Japan
नेपाली समय : 04:42:50
जापानी समय : 07:57:50
Tag: आफन्तबाटै सुरक्षा छैन भने अन्त कहाँ होला ?
आफन्तबाटै सुरक्षा छैन भने अन्त कहाँ होला ?
Posted on November 10, 2016 November 10, 2016 by Yadav Devkota
नुवाकोटमा तीनजनाको हत्या
भनिन्छ मानिस सामाजिक प्राणी हो । ऊ घर परिवार र समाज बिना एकपल पनि बाँच्न सक्दैन । तर परिवारकै सदस्यले वा आफन्तले नै आफन्तको ज्यान लिन्छ भने कहाँ गएर मान्छेले जीवन सुरक्षाको अनुभूति गर्ने भन्ने प्रश्न यहीनेर खडा भएको छ रोल्पालीका सामु ।
यसैगरी जेदबाङ–८ रोल्पाकी ६३ वर्षीय मनसरी विकले २०७३ साउन २७ गते आफ्नै नाति ९छोरीको छोरा० ११ वर्षीय दिनेश बुढालाई कुटपिट गरी मारेको अभियोगमा पक्राउ गरी थप अनुसन्धानका लागि थुनामा राखिएको छ । विककी छोरीले दोस्रो बिहे गरेर गएपछि विकले नातिलाई आफँैसँग राख्दै आउनुभएको थियो । उहाँले नातिलाई यसअघि पटक पटक धम्की दिने तथा कुटपिट गर्ने गरेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको देखिन्छ ।
यस्तै जिल्ला अदालत रोल्पाका डिट्ठा केशवकुमार केसीले जिल्ला अदालत रोल्पामा काम गर्दाको करिब चार वर्षको अनुभव सुनाउँदै भन्नुभयो – “जिल्लामा धेरैजसो घटना पारिवारिक र सामुदायिक विवादका कारण नै घटेका पाइन्छन् भने कतिपय घटना व्यक्तिगत रिसइबीको बदला लिन खोज्दा वा आफूले गरेका गल्ती कमजोरीलाई लुकाउने प्रयास गर्दा यस किसिमका घटना घट्ने गरेका छन् ।
उता नुवाकोटमा घरायसी झगडामा एक दम्पति सहित हत्यामा संलग्न अर्का एकजनाको हत्या भएको छ । जिल्लाको दुर्गम गाविस लिखु २ मजुवाका ७२ वर्षिय धनबहादुर तामाङ र ७१ वर्षिया उनकी श्रीमती कान्छी तामाङको छिमेकी २३ वर्षिय रवि तामाङ लगायतले हत्या गरेका हुन् ।
हत्यामा संलग्न ५३ वर्षिय सुन तामाङ पनि घटनास्थलबाट केही दुरीमा मृत अबस्थामा भेटिएका छन् । घटनामा संलग्न भनिएका रवि र उनका ४३ वर्षिया आमा दिलमायालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
मृतककी छोरी दिलमायाले बोक्सी लगाएको तथा आफ्नो जग्गा हडपेको भन्दै रविले यसअघि धम्क्याउने गरेको प्रहरीलाइ बताएकी छन । सुन तामाङको कसरी मृत्यु भयो भन्ने खुल्न सकेको छैन ।
Posted in जन सरोकारTagged आफन्तबाटै सुरक्षा छैन भने अन्त कहाँ होला ?